Ma laga Yaaba Amma suurtogal Ma noqonkarta In Beelaha Gabooye Ee Reer Somaliland Ay Inaga Soo Dacweeyaan Maxkamadda Caalamiga Ah ee Hegue |
Eyagoo ku hadlayey ereyo culayskooda leh oo aan hore looga maqli jirin marka ay warbaahinta ka hadlayaan. Waxaana ka mid ahaa hadaladaa ‘ma qadaneyno in aad labada daanba wax ku cuntaan reer Somaliland-ow, anaguna idiin daawano ” ‘Dul qaadkii wuu naga soo dhammaadey, waxaanu xaq u leenahay waa inaanu helnaa.”
Maxaynu runta iskugu sheegi laanahay, oo maskaxdeenana ka sii jeedda aynu ugu soo jeedin waynay walaalaheenna dulman ee wax inaga dalbanaya.
Waxa kale oo ay Soomaalidu tidhaahdaa ‘ma anaa waalan mise caddan baa laga heesayaa’. waxa aan uga jeedaa, siyaasiga kursi doonka ahi marka doorashada loo olaleynayo meel walba wuu u galaa inuu kasbado codka ummaddiisa. Laakiin nasiib darro arki maysid xisbiyadda iyo siyaasiyiinta dhex mushaaxayasa xaafadaha ay deggan yihiin beelaha Gabooye, iyagoo ka ololaysanaya sidii ay cod uga heli lahaayeen. kana maqlimeysid Qadiyada Gabooyaha malaha shaydaan baa u diidaya inay ka hadlaan qaddiyadooda dhabta ah! Waxa kale, oo aan la sii yaabaa marka aynu qaadka ruugayno, ee dareenadeenu fur-furmaan ee wax jira, wax nool, wax dhintay iyo waxaan jirinba oo mid walaba iska fataho in aynu ka hadalo xataa arki maysid mid mirqaan u geeyey inuu ka hadlo qaddiyadda beelaha Gabooye. Waxaan ku soo koobi lahaa, aniga u mahadnaqo qeybaha kala duwan ee beelahaasi metalayey ee shirkaasi iskugu yimid, waxaanan u soo jeedinaya inay halkaasi ka sii wadaan, oo ay aragti fog la yimaadaan. Isla markaana aanay dib u baryin waxay xaq u leeyihiin, meel kasta oo ay ka helayaan iyo si kasta oo ay ku helayaan ay sameeyaan, oo aanay u dulqaadan bahdilaadda axmaqnimadda ah ee in badan lagu hayey. Reer somaliland-na waxaan odhan lahaa ha noqonina sidii gabaygii caanka ahaa uu ku soo qaatay Cabdilaahi Suldaan Timacadde, ee uu ka hadlayey madax-adaygga Soomaalida ee uu ku metelay DHAGAXDIXEEDKA. Waxa kale oo iyaduna xusid mudan hees can ah oo ku jirtay Riwaayaddii la odhan jiray Hablayahow Hadmaad Guursan Doontaan, ee heestii ay ku luuqeyneysay Sado cali Alleh ha u naxariistee ee aheyd ‘culimadaa adduunkee, caafimaadka baadhaay, cuduradda la dabar goyn caashaqa ha lagu daro’, ana waxaan u beddeli lahaa ‘culimada adduunkee, caafimaadka baadhaay cuduradda la dabar goyn, cabashada iyo cadaadiska Gabooyaha ha lagu daro”. Hadal lama sudhnaadee waxay leeyahay walalaheyga
Fiiro gaar ah: waxaad maqaalo badan oo aan qaddiyadan ka qoray laga helayaa internetka. Waxaana ka mid ahaa maqaaladaas ‘Naga Guura Amma Naga Guursada’oo aheyd Riwaayad uu sameeyay Alleh ha u naxriistee Abdikariim shabaash . iyo qoraal kale ooay ka mid ahayen “soleygii Macaana ee dumar gabooyahu iibin jiran oo beeshodii caanka ku aheyd illa aakhirkii 1970 aadkii iyo iyagii cirka kagu salooshay”. talooyin badan oo aan u jeediyey madaxda Somaliland oo arrintan khuseeya. Ciddii talo ka dhiibanaysa way ila soo xidhiidhi kartaa.